AASHTO M247 Standards Dual-coated Glass Beads China Manufacturer
Description:AASHTO M247 Standards Dual-coated Glass Beads,Porofo matevina vita amin'ny labiera ho an'ny marika Highway,American Standards Dual-coated Glass Beads
Home > Products > Didy roa vita tamin&#39;ny rongony > AASHTO M247 Standards Dual-coated Glass Beads
Ny fiarovana ny fahazavana mitaratra ny gorodona dia ampahany manan-danja amin'ny fiarovana ny arabe, amin'ny fitazonana ny marika hita maso andro sy alina.
Mandritra ny andro dia mampiseho ny fahitana ampy ny fotodrafitrasa fototry ny fototarazo, izay mifanohitra amin'ny asfalt. Amin'ny alina dia tsy ampy ny fanoherana ny tsipika fotsy ary tsy maintsy ampitomboina amin'ny fampitomboan'ny jiro mitaratra tariby.
Ny kofehy fitaratra dia azo zaraina amin'ny fitaovana fametrahana lalana. Mandritra ny vanim-potoana misy ny mari-pamantarana dia hitodika amin'ny hazavana ny hazavana ary hisarihana ny tsipika hita mandritra ny alina. Azo atao koa ny manampy ny fitaovana fanoratana eny amin'ny arabe mandritra ny fampiharana mba hahazoana antoka ny fisian'andro.
Porofo vita amin'ny ravin-damba roa vita tamin'ny labiera Contact Now
AASHTO M247 Standards Dual-coated Glass Beads Porofo matevina vita amin'ny labiera ho an'ny marika Highway American Standards Dual-coated Glass Beads KSL2521 Standards Micro Glass Beads AASHTO M247 TYPE Glass Beads JIS R3301 Standards Intermix Glass Beads Aashto-M247 Standards Glass Glasses Kanada Standards Intermix Glass Beads